बाबुरामलाई जसपाको अध्यक्ष बनाउने तयारी, केन्द्रीय समितिको संख्या आठ सय पुर्याइने – nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
Homeमुख्य समाचारबाबुरामलाई जसपाको अध्यक्ष बनाउने तयारी, केन्द्रीय समितिको संख्या आठ सय पुर्याइने
३ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:०१ नेपाली समाचार मुख्य समाचार 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने भएको छ । सोमबार र मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा डा. भट्टराई अध्यक्ष बनाउने भएको हो । पार्टी एकीकरणको समयमा डा. भट्टराईलाई नै अध्यक्ष बनाउने भद्र सहमति भएको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता जानुअगाडि भट्टराई अध्यक्ष रहेको बताए पनि अन्तिम समयमा आएर अध्यक्षबाट भट्टराईको नाममा टिपेक्स लागेको थियो । हाल जसपामा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै जसपाले केन्द्रीय समितिको संख्या आठ सय पुर्याउने भएको छ । विधान संशोधन गरेर उक्त संख्या पुर्याउन लागिएको स्रोतले जानकारी दियो । हाल जसपामा केन्द्रीय समितिको संख्या सात सय १ रहेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा पार्टी एकतकाका बाँकी काम, विधान संशशोधन र केन्द्रीय समिति, संघीय परिषद्को विस्तार तथा कार्यविभाजनबारे छलफल हुनेछ ।